राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका अध्यक्ष्य भन्छन्, लामो समय मन्त्रालयले नै आँलटाल गर्यो,बल्ल रिलिफ पाइयो
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र उपाध्यायले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कालागि दरखास्त आह्वान गर्न पाउँदा ठूलो गेम जिते जस्तो अनुभूति व्यक्त गरेका छन् । उपाध्यायले सञ्चालक…
काठमाडौं । बीमा समितिले पछिल्लो समय विदेशी कम्पनीसँग गरिने पुनर्बीमामा कडाईको नीति लिँदा यहाँका पुनर्बीमा कम्पनीहरु जोखिममा पर्ने देखिएको छ । यस कडाईले नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम धान्नेभन्…
काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले पुनर्बीमा व्यवसाय बढाउनका लागि सर्वप्रथम पुनर्बीमा कम्पनीहरु आफै गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले पुनर्बीमा व्यवसाय बढाउन गाह्…
एकल बीमाशुल्कको पोलिसि र इन्सेन्टिभमा कम्पनीहरू असन्तुष्ट, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मानौंः समिति
काठमाडौं । एकल बीमाशुल्क (सिंगल प्रिमियम पोलिसि)ले बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढवा दिइरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले गुनासो गरेका छन् । बीमितहरूले एकै पटकमा जम्मै प्रि…
काठमाडौं । बीमा समितिले एलआईसी नेपाललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी दिन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । आफ्नो व्यवसाय कम भएको भन्दै भुक्तानी दिन ढिलाई गर्दै आएको नेपाल पुनर्बीमालाई समितिले…
दश रूपियाँले घट्यो एलआईसी नेपालको बोनस दर, खस्किएको होइनः दास
काठमाडौं । एलआईसी नेपालले बीमितलाई दिने बोनस दरमा अनुमानभन्दा निकै कम प्रभाव परेको दाबी गरेको छ । कम्पनीले अहिले बोनस दर व्यापकरूपमा घट्ने वातावरण सिर्जना भए पनि न्यून प्रभाव परेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधि…
काठमाडौं । वर्तमान समयमा पनि धेरै जनाले बीमा के हो ? भन्ने नबुझेको देखिन्छ । त्यस्तै, बीमाले कसरी काम गर्छ ? भन्ने विषयमा धेरैमा अन्योलता सिर्जना हुने गर्छ । जीवन बीमामा बोनस दरको भूमिका निकै नै महत्वपूर्ण हुन्छ …
जोशीको आक्रोस– बिचौलियाहरू अजिंगर जस्तो मुख बायर बसेका छन्, सर्भेयरलाई मात्रै के दोष ?
काठमाडौं । सर्भेयर संघ नेपालका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद जोशीले नेपाली सर्भेयरले सधै बिडम्बनामै काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । उनले सर्भेयरहरुलाई मात्रै दोष दिने तर उनीहरुको काममा सहजीकरण भने कसैले नगरिदि…
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)को टिएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) अपग्रेड गर्न शेयर लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । टिएमएस अपग्रेड नहुँदा कारोबार गर्न असहज भएको उनीहरुको गुनासो छ । कारोबा…